Global Voices teny Malagasy » Sarimiaina Efatra Mandala Ny Fifandeferana Ara-pivavahana Sy Ny Fiarovana Ny Ankizy Mpitsoa-ponenana ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Novambra 2016 4:46 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Zon'olombelona
Tamin'ny taon-dasa, nasongadin'ny  [mg] Global Voices ny asan'ny Equality Myanmar [Fitovian-jo Myanmar], fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana namokatra  fitaovana ho an'ny haino aman-jery marolafy mba hampiroboroboana ny zon'olombelona ao Myanmar.
Nanomboka hetsika isan-karazany ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena ao Myanmar mba hampiroboroboana ny filaminana, ny rariny, sy ny fifandeferana. Na dia ireo mpisera aza dia navitrika tamin'ny fanoherana  ireo teny fankahalana . Fomba tena ilaina mba hanamafisana ny foto-kevitry ny zon'olombelona misy eo amin'ny fiarahamonina ihany koa ny fampiasana ireo sarimiaina.
Maneho ireo olana manan-danja izay natao ho mora azon'ny mpijery ireo lahatsary avy amin'ny Equality Myanmar [Fitovian-jo Myanmar]. Ohatra, mampahatsiahy ny mpijery momba ny vokatry ny fampielezam-baovao diso amin'ny fanapariahana fankahalana ao amin'ny fiaraha-monina ity lahatsary momba ny fahasamihafana  ity:
Ao anatin'ity lahatsary ity, niray hina namonjy sy nizara  fanampiana ho an'ireo tra-boina ny vondrona mpilatsaka an-tsitrapo misolotena ireo fivavahana samihafa. Fomba tsotra kanefa fampahatsiahivana mahery vaika ho an'ny olona manana finoana samy hafa fa afaka miaina sy miara-miasa ao anatin'ny filaminana tsara izy ireo:
Manazava ity lahatsary ity fa afaka manaisotra ny zon'ny tanora hieritreritra malalaka sy hamorona ny fanavakavahana :
Farany, mampiseho ny tolon'ny ankizy mpifindra monina  izay noterena handositra ny tranony ity lahatsary ity. Manamafy ilay lahatsary fa ilaina  ny,mahatakatra ny manjo ireo mpitsoa-ponenana sy ny fidiran'ny fanjakana an-tsehatra mba hamonjena ireo ankizy mpifindra monina avy amin'ny fanondranana olombelona an-tsokosoko. Loza mitatao iray hafa izay asehon'ny lahatsary ihany koa ny toe-tsaina manavakava-bolokoditra ataon'ireo mponina an-drenivohitra:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/16/92009/
 mpifindra monina: https://www.youtube.com/watch?v=KLVJZ2EtuaU&list=PLEFA6C8F93ABA10AF&index=9&spfreload=10